5-cayaaryahan oo ajnabi ah ayaa kamid noqday suuqa kala iibsiga horyaalka Somaliya %
5-cayaaryahan oo ajnabi ah ayaa kamid noqday suuqa kala iibsiga horyaalka Somaliya
Maalin ka hor ayuu xermay dhaqdhaqaaqa suuqa kala iibsiga cayaartoyda ee horyaalka Somaliya, waxaana lakala qaatay ku dhawaaad 25 cayaaryahan iyadoo kooxda dalka ay ku soo biireen 5 cayaaryahan oo ajnabi ah .
Todobadii saxiix ee ugu waaweyneyd ee Suuqa Somaliya
Cayaaryahankii hore ee kooxda Elman Cabdulaahi Ciise Maxamud [John] ayaa waxa uu ku biiray kooxda Kubada Cagta ee Horseed waxaana uu la Galay hishiis labo sano ah ,ciyaaryahankan ayaa dalka ka maqnaa mudo labo sano ah .
Laacibkii hore ee kooxda kubada cagta Batroolka Maxamed Cabdulaahi Xuseen oo lagu Naaneyso Leeto ayaa ku biiray kooxda Gadiidka .
Cayaaryahankan ayaa ka mid ah ciyaaryahanadiii ugu sameynta badneyd kooxda Batroolka sanadahii ugu danbeeyay .
Daafacii hore kooxda kubadda cagta Jeenyo iyo xulka qaranka Soomaaliya Xamse ayaa si rasmi ah ugu biiray naadiga Banadir Sports Club.
Kooxda Kubada Cagta ee LLPP Jenyo ayaa si rasmi ah u xaqiijisay in ay lasoo wareegeen Xiddigaha Shakuur Aala iyo Daadir Cama, kaas oo Kooxdaan qayb ka ahaa Xagaagii hore, ka hor inta aysan musalufin Jenyo.
sidoo kale kooxda LLPP Jenyo ayaa soo bandhigtay saxiixeeda sedexaad tan iyo markii uu furmay suuqa kala iibsiga Soomaaliya, kaddib markii ay xaqiijiyeen adeega Cayaariyahan C/qaadir Sharif Mukhtar oo bahwaynta isboortiga ay u taqaano Ninje .
W\_Q: mohamed abdi mudey
Banaadir sports club oo lasoo wareegtay Afar cayaaryahan